Arduino + Bluetooth၊ ကျွန်ုပ်တို့ကိုယ်ပိုင်စီမံကိန်းများအတွက်နမူနာများနှင့်ဖြေရှင်းနည်းများ။ အခမဲ့ဟာ့ဒ်ဝဲ
အီလက်ထရွန်နစ်ဘုတ်များအကြားဆက်သွယ်ရေးသည်ကျွန်ုပ်တို့စီမံကိန်းများအတွက်အချိန်ကာလတစ်ခုအတွင်းလိုအပ်သောအရာဖြစ်သည်။ ထို့ကြောင့် IoT သို့မဟုတ် Internet of Things ကဲ့သို့သောစီမံကိန်းများသည်စမတ်ပစ္စည်းများကိုဖန်တီးရန်ပေါ်ပေါက်လာသည်။ ဒါပေမယ့် ၎င်းတို့အားလုံးသည် Bluetooth သို့မဟုတ်ကြိုးမဲ့ကဲ့သို့သောကြိုးမဲ့ဆက်သွယ်မှုရှိသောဘုတ်တစ်ခုလိုအပ်သည်။ နောက်တစ်ခုက Arduino + Bluetooth ဆိုတာဘာလဲ၊ ဒီနည်းပညာနဲ့ပတ်သက်ပြီးဘယ်လိုဖြစ်နိုင်ချေတွေ၊
1 Bluetooth ဆိုတာဘာလဲ။
2 Arduino ဘုတ်တွေမှာဘာ Bluetooth ရှိသလဲ။
3 Arduino + Bluetooth နဲ့ဘာလုပ်လို့ရလဲ။
4 Wdu (သို့) Arduino အတွက် Bluetooth လား။
ယခုအချိန်တွင်လူတိုင်းသည် Bluetooth နည်းပညာကိုသိနေပြီဖြစ်သည်။ ဒေတာတွေကိုမြန်မြန်ဆန်ဆန်နဲ့ထိထိရောက်ရောက်ပို့ပေးနိုင်အောင်ပစ္စည်းတွေကိုအတူတကွချိတ်ဆက်နိုင်တဲ့ကြိုးမဲ့နည်းပညာတစ်ခု အစည်းအဝေးကျင်းပမည့်နေရာ (သို့) router မလိုအပ်ပါ။ ဒီနည်းပညာကိုမိုဘိုင်းထုတ်ကုန်များစွာမှာတက်ဘလက်ကနေဆက်စပ်ပစ္စည်းတွေဖြစ်တဲ့နားကြပ်လိုမျိုးစမတ်ဖုန်းတွေ၊ desktop ကွန်ပျူတာတွေအထိတွေ့နိုင်တယ်။
အရာဝတ္ထုများ၏အင်တာနက်တွင် Bluetooth နည်းပညာသာမကကြိုးမဲ့ဆက်သွယ်မှုများသည်အရေးကြီးသောအစိတ်အပိုင်းတစ်ခုဖြစ်သည့်အပြင် Bluetooth နှင့်ပါသောပစ္စည်းအမျိုးမျိုးသည်စက်ပစ္စည်းများအကြားကွန်ယက်သို့မဟုတ်ဒေတာချိတ်ဆက်မှုကိုပိုမိုတိကျစေပြီးအချက်များစွာအပေါ်တွင်မမူတည်ပါ။ ကြုံတွေ့ရသို့မဟုတ်ဒေတာ node များ။ ဒါတွေအားလုံးအတွက် Bluetooth နည်းပညာသည် Arduino၊ IoT နှင့်နောက်ဆုံးပေါ် Raspberry Pi မော်ဒယ်များတွင်ပါ ၀ င်သည်။
Bluetooth ဗားရှင်းတွေအများကြီးရှိတယ်၊ တစ်ခုချင်းစီဟာအရင်ကတိုးတက်ခဲ့တယ်။ အားလုံးကတူညီတဲ့ရလဒ်တွေရပေမယ့်ပိုမြန်တဲ့နည်းနဲ့စွမ်းအင်သုံးစွဲမှုနည်းတယ်။ ထို့ကြောင့်, Arduino + Bluetooth သည်နည်းပညာလောကတွင်အသုံးများဆုံးပေါင်းစပ်မှုတစ်ခုဖြစ်သည်.
သို့သော်လက်ရှိ မော်ဒယ်မရှိ Arduino UNO ပုံမှန်အားဖြင့်ဘလူးတုသ်ပါရှိသည် နှင့်မည်သည့်အသုံးပြုသူကိုပုံမှန်အားဖြင့်ဒီနည်းပညာကိုသုံးနိုင်သည်။ ၎င်းသည်ကျွန်ုပ်တို့အားဒိုင်းများသို့မဟုတ်တိုးချဲ့ကဒ်များမှတစ်ဆင့်သို့မဟုတ် Arduino စီမံကိန်းအပေါ်အခြေခံထားသောအထူးပြုမော်ဒယ်များမှတစ်ဆင့်ရှာဖွေရမည့်အရာဖြစ်သည်။
လတ်တလောတွင် Bluetooth နည်းပညာဖြင့်အသုံးပြုသောကိရိယာများအတွက်အသုံးပြုမှုအသစ်တစ်ခုကိုပြုလုပ်ခဲ့သည် ဘလူးတုသ်ကိရိယာများကို Beacons (သို့) မကြာခဏအချက်ပြမှုပေးသောရိုးရှင်းသောကိရိယာများအနေနှင့်အသုံးပြုခြင်း။ ဒီ beacons (သို့) beacons တွေကစမတ်စက်တိုင်းကိုဒီ signal အမျိုးအစားများကိုစုဆောင်းပြီး geolocation အပြင် 3G connection (သို့) wireless access point ကဲ့သို့သောနည်းပညာများနဲ့သာရရှိနိုင်တဲ့သတင်းအချက်အလက်အချို့ကိုခွင့်ပြုသည်။
Arduino ဘုတ်တွေမှာဘာ Bluetooth ရှိသလဲ။
ငါတို့ပြောခဲ့သလိုပဲ Arduino board အားလုံး bluetooth နဲ့သဟဇာတမဖြစ်ခဲ့ဘူး၊ model အားလုံးမှာသူတို့ရဲ့ board ထဲမှာ Bluetooth ထည့်ထားတာမဟုတ်ဘူး။ အကြောင်းကတော့နည်းပညာသည်အခြားနည်းပညာများကဲ့သို့အခမဲ့မွေးဖွားခြင်းမဟုတ်သကဲ့သို့ Arduino ပရောဂျက်အားလုံးသည် Bluetooth လိုအပ်သောကြောင့်မဟုတ်ပါ။ ထို့ကြောင့်၎င်းကိုဆုံးဖြတ်ခဲ့သည် ဒီ function ကိုရှိပြီးသားနှင့်မည်သည့် Arduino ဘုတ်နှင့်ချိတ်ဆက်နိုင်မယ့်ဒိုင်းများသို့မဟုတ်ချဲ့ထွင်ရန်ပျဉ်ပြားမှလွှတ်လိုက်ပါ Motherboard တွင်အကောင်အထည်ဖော်သည့်အလားအတူတူအလုပ်လုပ်ပါ။ သို့တိုင်ဘလူးတုသ်နှင့်အတူမော်ဒယ်များရှိသည်။
လူကြိုက်အများဆုံးနှင့်မကြာသေးမီကမော်ဒယ် အဲဒါကို Arduino 101 လို့ခေါ်တယ်။ ဒီပန်းကန်မှဖြစ်ပျက် ဘလူးတုသ်ဖြင့်ပထမဆုံး Arduino ဘုတ်ကို Arduino Bluetooth ဟုခေါ်သည်။ ဒီပြားနှစ်ခုကိုပေါင်းထည့်ရမယ် အဆိုပါ BQ Zum Core မူရင်းမဟုတ်သော Arduino ဘုတ်အဖွဲ့ဖြစ်သော်လည်းဤစီမံကိန်းနှင့်စပိန်မူရင်းအခြေခံသည်။ ဒီ Board သုံးခုသည် Arduino Project ကိုအခြေခံထားပြီး Bluetooth မှတဆင့်ဆက်သွယ်နိုင်စွမ်းရှိသည်။ ဒါပေမယ့်ကျနော်တို့ပြောခဲ့သလိုပဲဒါကတစ်ခုတည်းသောရွေးချယ်စရာမဟုတ်ပါဘူး။ အခြား extension extension သုံးပြားရှိပါသည် သူတို့ကဘလူးတုသ် function ကိုထည့်ပါ။ ဤ extension များ ၎င်းတို့ကို Bluetooth Shield, Sparkfun Bluetooth Module နှင့် SeedStudio Bluetooth Shield ဟုခေါ်သည်.
အထက်တွင်ဖော်ပြခဲ့သည့်အခြေခံဒီဇိုင်းတွင် Bluetooth ပါရှိသောပျဉ်ပြားများသည်အခြေခံပေါ်တွင်ရှိသည့်ကိရိယာများဖြစ်သည် Arduino UNO ကျန်ဘုတ်အဖွဲ့နှင့်ဆက်သွယ်သောဘလူးတုသ် module တစ်ခုထည့်သွင်းထားသည်။ မှလွဲ Arduino ၁၀၁၎င်းသည် 32-bit ဗိသုကာရှိပြီးဖြစ်သောအခြား Arduino board များနှင့် ပတ်သက်၍ သိသိသာသာပြောင်းလဲသွားသော Arduino Project အတွင်းရှိအခြားမော်ဒယ်များထက်ပိုမိုအားကောင်းသည်။ အဖြစ်မှန်၌ရှိသော်လည်း, အချို့သောမော်ဒယ်များကိုရောင်းချခြင်းသို့မဟုတ်ဖြန့်ဝေခြင်းမပြုတော့သောကြောင့်နံပါတ်ပြားအရေအတွက်သိသိသာသာလျှော့ချနိုင်သည် Arduino Bluetooth ကဲ့သို့၎င်းကို၎င်း၏စာရွက်စာတမ်းများမှတစ်ဆင့်သာအောင်မြင်စွာတည်ဆောက်နိုင်ခြင်းဖြင့်၎င်းကိုကျွန်ုပ်တို့အောင်မြင်နိုင်သည်။
တိုးချဲ့မှုများရွေးချယ်မှုသို့မဟုတ် ဘလူးတုသ်ဒိုင်းလွှားသည်အလွန်စိတ် ၀ င်စားပါသည်၊။ ဆိုလိုသည်မှာကျွန်ုပ်တို့သည်ဘုတ်ကိုအသုံးပြုသောအချို့သောစီမံကိန်းအတွက်ဘုတ်ကိုအသုံးပြုသည်။ ထို့နောက်ဘလူးတုသ်မရှိသောအခြားပရိုဂျက်တစ်ခုအတွက်တိုးချဲ့မှုကိုသော့ဖွင့်သည်။ ဤနည်းလမ်း၏ဆိုးကျိုးများမှာတိုးချဲ့ခြင်းများသည်မည်သည့်စီမံကိန်းကိုမဆိုပိုမိုသိသာစွာစျေးကြီးစေသည်၊ အဘယ့်ကြောင့်ဆိုသော်တစ်ခုသာအလုပ်လုပ်မည်ဆိုပါက Arduino boards နှစ်ခုကို ၀ ယ်သကဲ့သို့ဖြစ်သည်။
Arduino + Bluetooth နဲ့ဘာလုပ်လို့ရလဲ။
Arduino ဘုတ်ကိုသုံးလို့ရမယ့်ပရောဂျက်တွေအများကြီးရှိပေမယ့်ဆက်သွယ်ရေးလိုအပ်တယ်။ ကျွန်ုပ်တို့သည်လက်ရှိတွင် Bluetooth နှင့်အတူမည်သည့်စမတ်စက်ကိုမဆိုတွေ့ရှိနိုင်သောကြောင့်၊ အင်တာနက်ချိတ်ဆက်မှုလိုအပ်သည့်မည်သည့်စီမံကိန်းကိုမဆို Arduino Bluetooth ဖြင့်ဘုတ်အဖွဲ့တစ်ခုဖြင့်အစားထိုး။ ဘလူးတုမှတစ်ဆင့်အင်တာနက်ကိုပို့နိူင်သည်။ ကျွန်ုပ်တို့လည်းလုပ်နိုင်သည် စမတ်ပီဖန်တီးပါ Arduino + Bluetooth ဘုတ်များကိုကျေးဇူးတင်ပါတယ် ပထဝီဝင်အနေအထားအရကိရိယာတစ်ခုကိုနေရာချထားရန် beacons များ။ ပြောစရာမလိုပါဘူး ကီးဘုတ်၊ မောက်၊ နားကြပ်၊ မိုက်ကရိုဖုန်းစသည်တို့ကိုဒီအီလက်ထရွန်နစ်စက်ဖြင့်သုံးနိုင်သည်လက်ရှိမည်သည့် operating system မဆို bluetooth နည်းပညာနှင့်မှန်ကန်စွာအလုပ်လုပ်သည်။
တူသောလူကြိုက်များ repositories ကို၌တည်၏ ညွှန်ကြားချက် ကျွန်ုပ်တို့သည် Bluetooth နှင့် Arduino ကိုသုံးသောမရေမတွက်နိုင်သောစီမံကိန်းများကိုရှာဖွေနိုင်သည် Arduino + Bluetooth ကိုအသုံးမပြုသော်လည်း၎င်းနှင့်သက်ဆိုင်သောအပြောင်းအလဲများနှင့်အတူအလုပ်လုပ်နိုင်သည့်အခြားစီမံကိန်းများ။
Wdu (သို့) Arduino အတွက် Bluetooth လား။
ဝိုင်ဖိုင်လား၊ လူအများမိမိတို့ကိုယ်ကိုမေးကြမည့်မေးခွန်းကောင်းတစ်ခုဖြစ်သည်။ စီမံကိန်းများစွာအတွက် Wi-Fi ဆက်သွယ်မှုသည် Bluetooth ဆက်သွယ်မှုကိုပြုလုပ်နိုင်သည်။ ယေဘုယျအားဖြင့်ကျွန်ုပ်တို့သည်နည်းပညာနှစ်ခုလုံး၏အကျိုးကျေးဇူးများနှင့်ဆိုးကျိုးများအကြောင်းပြောဆိုရန်လိုအပ်လိမ့်မည်ဖြစ်သော်လည်းဤကိစ္စတွင် Arduino နှင့်အတူစီမံကိန်းများတွင်ကျွန်ုပ်တို့သည်အလွန်အရေးကြီးသောအချက်ကိုလေ့လာရမည်ဖြစ်သည်။ စွမ်းအင်အသုံးစရိတ်။ တဖကျတှငျ, သငျသညျအဘယျစွမ်းအင်ကိုကြည့်ရှုရန်ရှိသည်နှင့်ထိုအရပ်မှငါတို့သည် Wi-Fi ကိုသို့မဟုတ် Bluetooth ကိုသုံးပါရှိမရှိဆုံးဖြတ်ရန်။ ထို့အပြင်ကျွန်ုပ်တို့တွင်အင်တာနက်အသုံးပြုခြင်းရှိမရှိကိုကြည့်ရှုရန်လိုသည်။ အကြောင်းပြချက်မရှိဘဲကြိုးမဲ့ဆက်သွယ်မှုသည်များစွာအတွက်အသုံးမဝင်ပါ။ အင်တာနက်မလိုအပ်သော Bluetooth နှင့်ချိတ်ဆက်ရန်ကိရိယာတစ်ခုသာမရှိပါ။ ပေးထားသည် ဤအချက်နှစ်ချက်သည်ကျွန်ုပ်တို့၏ပရောဂျက်သည် Arduino + Wifi သို့မဟုတ် Arduino + Bluetooth ကိုသယ်ဆောင်မပို့ကိုရွေးချယ်ရန်ဖြစ်သည်။
ပုဂ္ဂိုလ်ရေးအရကျွန်ုပ်တို့၌စွမ်းအင်ထောက်ပံ့မှုနှင့်အင်တာနက်ဆက်သွယ်မှုကောင်းမွန်ပါကမည်သည့်ရွေးချယ်မှုသည်မဆိုကောင်းကြောင်းကျွန်ုပ်ထင်ပါသည်၊ သို့သော်ကျွန်ုပ်တို့၌မရှိလျှင်ကျွန်ုပ်သည်နည်းပညာများစွာနှင့်နောက်ဆုံးပေါ်သတ်မှတ်ချက်များကိုမလိုအပ်သော Arduino + Bluetooth ကိုကိုယ်တိုင်ကိုယ်ကျရွေးချယ်ပါမည်။ စွမ်းအင်နှင့်အသုံးပြုရန်ပိုမိုထိရောက်သောဖြစ်ကြသည်။ ပြီးတော့သင် သင်၏စီမံကိန်းအတွက်မည်သည့်နည်းပညာကိုသုံးရမည်နည်း။
ဆောင်းပါး၏လမ်းကြောင်းအပြည့်အစုံ - အခမဲ့ဟာ့ဒ်ဝဲ » Arduino » Arduino + ဘလူးတုသ်